Taxaabistaydii Iyo Tacaddigii Aan Arkay: Bilawgii Dhegaysiga Dacwadda. Qaybta 7aad
(Hadhwanaagnews) Wednesday, January 11, 2017 13:32:25
Kokii uu wacay taleefanka Farxaan, waxa uu arkay in uu xidhan yahay. Sidaas awgeed ayaa dib la iigu celiyay. Saddex maalmood kaddib waxa la ii xaqiijiyay
14kii September 2016ka maalin Arbaca ah ayaa mar kale la ii qaaday Maxkmadda, waxaana subaxnimadaas xafiiska joogay Garsoore Yaxye Xuseen Yuusuf. Waxa uu ii ballan-qaaday in dhakhso loo bilaabi doono dhegaysiga dacwadda la ii haysto, waxa uu intaas raaciyay in xafiiska xeer-ilaalinta la keenay gal-dacwadeedkaygii, isla markaana aanu hubin in qof lagu qoray.“Farxaan Mire Cismaan ayaa oogista dacwadda ku qoran” ayaan idhi.
Kokii uu wacay taleefanka Farxaan, waxa uu arkay in uu xidhan yahay. Sidaas awgeed ayaa dib la iigu celiyay. Saddex maalmood kaddib waxa la ii xaqiijiyay in Garsoore Khaalid Cabdi Shiil loo xilsaaray garnaqa/dhegaysiga/xukunka dacwadda la igu oogayo. Haa… Xuuraanka iyo dhega-dhegaynta kiiskaygu wuu badnaa, mar kastana tallaabada la qaado
waan ka war hayn jiray.
Wuxuu ahaa garsoore magaciisu igu cusub yahay, laakiin markii aan maskaxda tuujiyay waxa ii muuqatay in ay walaalo yihiin jaallahay/walaalkay Siciid Cabdi Siil, Maamulaha Dugsiga Sare ee Faarax Oomaar, malahaygina wuu rumoobay. Saw tii hore loogu maansooday:
Waxyi iguma soo dego haddana, wax ima seegaane!
15kii Septebmer 2016ka waxa C.I.D iigu yimi Odayga Somaliland Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf (Cabdi-Waraabe) oo uu la socdo darawiilkiisa gaarka ahi. Intii aanu soo gaadhin halkii aan ku xidhnaa, waxa uu soo maray xafiisyada ciidanka, halkaasna waxa lagu siiyay warbixin ku saabsan sababaha la ii taxaabay. Hadalladan ayaanu is-weydaarsannay:
“Adeer ii warran?”
“Waa nabade. Ii warran maxaad samaysay?”
“Adeer, in muddo ah ayaa xadhig la iigu hanjabayay. Anigu waxa aan qoray dhambaallo aan ku dhaliilayo madaarka Hargeysa iyo wasaaradda duulista”
“Meel ayaad ka dhacday. Madaarka wax badan ayaa laga qabtay. Imaka ma Maxamed Yuusuf ayaan u tagaa?”
“Haa adeer, u tag maamulaha madaarka Hargeysa”
Kolkii uu doonay in uu Xaajigu dhaqaaqo ayaa ay la hadleen qaar maxaabiista ka mid ahi “Adeer, ma inankiinna oo qudha ayaad u timi?”. Waa uu hakaday, kaddibna inta ay isu sheegeen ayaa uu dhegaystay cabashadooda iyo waxyaabaha ay u xidhnaayeen. Waxa uu nagu sagootiyay duco-waayeelnimo. Inkasta oo uu karaankii dedaalay, waanwaantiisa waxa cubba-dhawray qolyihii aan u xidhnaa.
Isla subaxnimadaas uu Xaaji Cabdi ii yimi, waxa isoo booqday Xildhibaan Weli Axmed Xaawa oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland. Xildhibaanku waxa uu sheegay in ay u tageen Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland, isla markaana uu u sheegay in aan u xidhanahay Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka. Isaga oo la-yaabban tacaddiga ay sameynayaan dhallinyarada xilka loo dhiibay, kuna nuuxnuuxsanaya in aanay daba-galka hawsha ka hadhi doonin ayaa uu xildhibaanku i sagootiyay.
Kolkii aan xidhnaa muddo bil ku dhow, ee aan la bilaabin dhegaysiga dacwadda ayaa si diblomaasiyad leh qoyska loo soo dhex mariyay heshiis nuxurkiisu yahay in aanan waxba ka qorin Wasaaradda Duulista, Wasaaradda Madaxtooyada iyo Ciidanka Booliska. Sidoo kale waxa qaar ka mid ah walaalladay loo soo jeediyay in ay qoraan warqad ay ku dammaanad-qaadayaan in aanan wax dambe oo dhaliil ah baahinnin. Laakiin arrinkaas waxa aanu u daruurnay gaashaanka, waanan qaaddacnay. Waxyaabaha aanu ku garnaqsannay waxa ka mid ahaa in aan ahay xubin ka tirsan Golaha Dhexe ee Xisbi Mucaarid ah, sidee ayaa qof xisbi ka mid ah looga horjoogsan karaa in uu xukuumadda toosiyo?
Dhambaalladani ma ay noqonnin kuwo noo cuntama oo aanu sinaba u liqi karno, cid kastana waxa aanu hor dhignay “Heshiisku iyo dammaanaddu dhib malaha. Horta yuu u xidhnaa? Yaa taxaabistiisa ka dambaysay? Cidda uu wax ka tirsanayaa, miyaa ay daw-bixin diyaar u tahay?”. Inkasta oo ay dhexdhexaadintan qabyada ah si toos ah ama si dadban u galeen masuuliyiin dawladda xilal ka haya, cuqaal, ganacsato iyo odayaal tol ahi, waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay. Arrinkina waxa uu isugu biyo-shubtay in sharciga lagu kala baxo.
Waa ay adagtahay in maxbuus dawladdu haysataa ku dhiirrado maxkamadda, laakiin waxa aan lahaa “Calool-adayg waa Alle wehelkii”. Iska bax iyo iska gal, waxa ka wanaagsan inaad maxkamad ku qaabbisho ragga dhuumaalaysiga ciyaaraya, ee dhagarta kuu maleegay.
24kii September 2016ka, maalin Sabti ah ayaa la ii qaaday maxkamadda Gobolka Maroodijeex, si loo bilaabo dhegaysiga dacwadda la igu eedeeyay. Subaxnimadaas waxa goobjoog ahaa Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen, Suxufi Cabdicasiis Bashiir Nuur (Aasaasaha Mareegtawww.xogreebnews), qoyskayga iyo saaxiibbo kale. Kolkii aanu galnay xafiiska Garsoore Khaalid Cabdi Shiil ayaa uu yidhi “Dad badan oo qoyska ah ayaa diyaar u ah in ay dhegaystaan dacwadda, waxa aynu tegaynnaa Hoolka Maxkmadda Rafcaanka”.
Kolkii uu garsooruhu si rasmi ah u naadiyay bilawga dhegaysiga dacwaddayda aan eedaysanaha ka ahaa, isla markaana uu dhibbane ka ahaa Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo uu metelayo xafiiska xeer-ilaalintu, oo summaddeedu ahayd 959/2016, xeer-ilaalintana uu tixraaceedu ka ahaa 1052/2016 ayaa uu xafiiska xeer-ilaalintu ii bandhigay eedo dhawr ah. Waxa aan u kala saaray kuwo run ah oo aan qoray, kuwo wanjal ah iyo qaar sidii aan u dhigay laga dhalan-rogay.
Waxa goor dambe noo yimi Qareennadii ii doodayay oo codsaday in dib loo dhigo, maadaama oo ay ka dib-dhaceen dhegaysiga dacwadda, waxa kale oo uu baadhaha dacwaddu sheegay in uu maraggii kowaad ee eeddaydu diiday in uu maxkamadda yimaaddo. “Maamulaha Madaarka dhawr jeer ayaan u tagnay. Isaga oo maqlaya taliyaha rugta booliska madaarku ayuu yidhi anigu ma imanayo maxkamadda, markaa waa in tallaabo laga qaado. Si cad ayuu noogu gacan-saydhay” ayaa uu yidhi Laba Xiddigle Maxamed Nuur Kaariye (Maxamed-dheere).
La soco qaybta siddeedaad haddii Eebbe idmo